Iwo 8 Akanakisa (Yemahara) Keyword Tsvagiridzo Yemidziyo ye2022 | Martech Zone
Chishanu, February 18, 2022 Muvhuro, Kukadzi 21, 2022 Aleh Barysevich
Keywords agara achikosha kune SEO. Ivo vanoita kuti injini dzekutsvaga dzinzwisise kuti zvemukati nezvei saka zviratidze muSERP yemubvunzo wakakodzera. Kana iwe usina mazwi makuru, peji rako haringasviki kune chero SERP sezvo injini dzekutsvaga dzisingazokwanise kuinzwisisa. Kana iwe uine mamwe mazwi asina kunaka, ipapo mapeji ako anozoratidzwa kune zvisina basa mibvunzo, izvo zvinounza kusashandisa kune vateereri vako kana kudzvanya kwauri. Ndicho chikonzero iwe uchifanira kusarudza mazwi akakosha uye tora akanakisa.
Mubvunzo wakanaka ndewekuti ungawana sei iwo akanaka, akakosha mazwi. Kana iwe uchifunga kuti zvinozokudyira mari yakawanda, saka ndauya kuzokushamisa - keyword research inogona kuve yemahara. Mune ino positi, ini ndichakuratidza seti yemahara maturusi ekutsvaga mazwi matsva uye hapana chaunobhadhara. Ngatitange.
Keyword Planner ndeimwe yezvinonzi zvidhinha-uye-dhaka zveGoogle zvishandiso zvekutsvagisa mazwi makuru. Izvo zvakanyanya kunaka pakutsvaga mazwi makuru ekushambadzira mishandirapamwe. Chishandiso chiri nyore kushandisa - zvese zvaunoda iGoogle Ads account ine 2FA (chinhu chinosungirwa izvozvi). Uye hezvino taenda. Kuita kuti mazwi ako akakosha awedzere kukosha, unogona kutsanangura nzvimbo nemitauro. Mhedzisiro yacho inogona zvakare kusefa kusasanganisa kutsvaga kwemhando uye mazano evakuru.
Sezvaunoona, Keyword Planner inokuita kuti uongorore mazwi akakosha zvichienderana nehuwandu hwekutsvaga pamwedzi, mutengo pakudzvanya, kushanduka kwekufarirwa kwemwedzi mitatu, zvichingodaro. Chinhu ndechekuti mazwi akakosha anowanikwa pano haazove akanakisa SEO mhinduro, sezvo chishandiso chakagadzirirwa kubhadharwa, kwete organic mishandirapamwe. Izvo zvinonyatso kujeka kubva kune seti ye keyword metrics iripo. Zvakadaro, Keyword Planner inzvimbo yakanaka yekutanga.
Chita Tracker by SEO PowerSuite isoftware ine simba ine anopfuura makumi maviri akakosha nzira dzekutsvagisa pasi pehodhi, kubva kuGoogle Vanhu vanobvunzawo kune akati wandei anokwikwidza nzira dzekutsvagisa. Pakupedzisira, izvi zvinokutendera kuti ugadzire zviuru zvemashoko matsva emazwi ese munzvimbo imwechete. Rank Tracker zvakare inoita kuti iwe utsvage mazwi akakosha anoenderana nenzvimbo yako uye mutauro wako waunonongedza. Sezvo zvine musoro kuti iyo data yakaunganidzwa kubva muinjini yekutsvaga muUS haizove yechokwadi kumibvunzo iri, toti, Russian kana Italian.
Rank Tracker zvakare inoita kuti ubatanidze yako Google Search Console uye Analytics maakaundi uye chaizvo uve neyako kiyi data data munzvimbo imwechete.
Pamusoro pemazwi akakosha pachawo, Rank Tracker inoratidzira matani emametrics ekukubatsira kuti uongorore mashandiro emazwi akakosha, senge nhamba yekutsvaga pamwedzi, keyword kuomerwa, kukwikwidza, kunofungidzirwa traffic, CPC, SERP maficha, uye zvimwe zvakawanda zvekushambadzira uye SEO paramita. .
Iyo skrini iri pazasi inoratidza iyo Keyword Gap module, iyo inoita kuti iwe uwane mazwi akakosha ayo vakwikwidzi vako vari kutoshandisa.
Chimwe chinhu chakanaka nezve Rank Tracker ndechekuti vagadziri vavo vanoteerera kune izvo vashandisi vanoda. Semuenzaniso, ivo vachangobva kudzosa iyo Keyword Difficulty tab:
Iyi tebhu inokuita kuti udzvanye chero kiyi kiyi uye nekukasira wowana epamusoro-gumi SERP zvinzvimbo pamwe chete nemhando yemhando yemapeji aya.
Rank Tracker zvakare inoita kuti iwe usefa mazwi ako akakosha neayo matsva epamberi mafirita system uye gadzira yakazara-chiyero kiyi mepu. Nhamba yemazwi akakosha, nenzira, haina muganho.
Pindura Vanhu Vose
Pindura Vanhu Vose inosiyana zvakanyanya kubva kune mamwe maturusi akafanana zvese mukuratidzwa uye mumhando yemhedzisiro. Sezvo iyi kiyi yejenareta ichipihwa simba neGoogle Autosuggest, mazano ese anowanikwa kuburikidza nePindura Ruzhinji ndiyo mibvunzo ine chekuita nemubvunzo wako wekutanga. Izvi zvinoita kuti chishandiso chinyatso batsira kana uchitsvaga-refu-muswe keywords uye mitsva yemukati mazano:
Pamusoro pemibvunzo, chishandiso chinoburitsa seti yezvirevo uye kuenzanisa zvine chekuita nemubvunzo wembeu. Zvese zvinogona kutorwa mu CSV fomati kana semufananidzo.
Yemahara Keyword Jenareta
Keyword jenareta chigadzirwa cheAhrefs. Ichi chishandiso chiri nyore kushandisa - zvese zvaunoda kuisa mhodzi yako kiyi, sarudza injini yekutsvaga nenzvimbo, uye voila! Keyword Jenareta inokugamuchira neseti yemazwi matsva emazwi akakosha uye mibvunzo ine hukama ine akati wandei metrics senge nhamba yekutsvaga, kuomerwa, uye zuva rekupedzisira data update.
Keyword Jenareta inoburitsa zana mazwi akakosha uye zana mubvunzo mazano emahara. Kuti uone zvakawanda, iwe uchakumbirwa kutenga rezinesi.
Mudhara wakanaka Search vavanyaradze inongokuratidza mazwi akakosha aunotorerekera. Kunyange zvakadaro, kune nzvimbo yebasa rinobereka zvibereko. Ichi chishandiso chinogona kukubatsira kuti uone mazwi akakosha ausingazive kuti iwe unomiririra, uye kuvanatsiridza zvinzvimbo. Mune mamwe mazwi, Tsvaga Console inoita kuti uwane mazwi asingashande.
Underperforming keywords ndiwo mazwi makuru ane zvinzvimbo kubva ku10 kusvika ku13. Haapo muSERP yekutanga asi anoda zvishoma optimization kuedza kuisvika.
Kutsvaga Console zvakare inokuita kuti utarise mapeji epamusoro kuti ukwidzise mazwi ako asingashande, nekudaro ichikupa yakanaka yekutangira mukutsvagisa mazwi makuru uye kugadzirisa zvirimo.
Ndokumbirawo, sezvaunogona kufungidzira kubva kuzita rechishandiso, inodhonza data kubva kuGoogle Vanhu vanobvunzawo saka inokugamuchira iwe neseti yemazano matsva emazwi. Zvese zvaunoda kuisa mhodzi yako kiyi uye tsanangura mutauro uye dunhu. Chishandiso chinozoitisa tsvakiridzo uye nekupa mhinduro seti yemibvunzo yakaunganidzwa.
Iyi mibvunzo ndeyechokwadi-yakagadzirwa-yakagadzirwa emukati mazano (kana kunyange mazita). Chinhu chimwe chete chinogona kuita kuti unzwe kugumbuka ndechekuti iwe unongova negumi chete emahara ekutsvaga pamwedzi uye haugone kutumira iyo data mune chero fomati. Zvakanaka, wakakwanisa sei, unogona kubvunza. Mhinduro ndeye screenshots. Haisi ipfungwa yakanaka kusanganisa zvidzitiro mumishumo yevatengi, asi inzira yekubuda kune zvaunoda. Zvese mune zvese, Zvakare Inobvunzwa yakanaka yemukati zano jenareta, uye mazano aanopa anogona kunge akanaka kune ese mablogiki uye ad mishandirapamwe.
Keyword Explorer chimwe chezviridzwa zvakavakwa zveMOZ. Izvi zvinoreva kuti iwe uchada MOZ account kushandisa chishandiso. Icho chiri chaizvoizvo chinhu chiri nyore. Iyo algorithm iri nyore nyore - iwe unofanirwa kuisa yako kiyi izwi, tsanangura dunhu nemutauro (vanoenda pamwechete mune iyi kesi), uye hezvino iwe. Chishandiso chinouya neseti yemazwi akakosha mazano uye yepamusoro SERP mhedzisiro yemubvunzo wembeu.
Kamwe kana iwe ukanyora Ona mazano ese mu Keyword Mazano module, chishandiso chinokuratidza 1000 nyowani keyword mazano, saka une akasiyana ekusarudza kubva.
Kana ari SEO metrics, iwe hauna zvakawanda zvekuongorora pano - chishandiso chinoburitsa chete vhoriyamu yekutsvaga uye kukosha (musanganiswa wemukurumbira uye semantic kufanana nembeu keyword).
Sezvakakumbirwawo, Keyword Explorer inokupa gumi yekutsvaga mahara pamwedzi. Kana iwe uchida mamwe data, iwe unozofanirwa kuwana yakabhadharwa account.
Keyword Ongororo ndeyemahara Surfer-powered Chrome plugin iyo, kana yangoiswa, inongoratidza iyo kiyi data data paGoogle SERP sezvaunotsvaga chero chinhu.
Kana zviri zveSEO nePPC metrics, Keyword Surfer icharatidza zvinotevera: nhamba yemwedzi yekutsvaga uye mutengo wekudzvanya kwembeu yemubvunzo, vhoriyamu yekutsvaga, uye nhanho yekufanana kweiyo nyowani keyword mazano. Huwandu hwemazano hunosiyana zvichienderana ne (pamwe?) izwi rekuzivikanwa, sezvo ini ndakawana 31 keywords e. chikafu cheIndia uye 10 chete ye gelato.
Chishandiso hachichinje nzvimbo zvinoenderana nemutauro wemubvunzo otomatiki, asi wakasununguka kuzvitsanangura wega kuti uwane data rakakodzera.
Pamusoro pezvo, chishandiso chinokupa iwe huwandu hwetraffic yemapeji ari muSERP yazvino uye huwandu hwemachesi chaiwo emibvunzo yavainayo.
Pamusoro pekuongororwa kwemazwi akakosha, chishandiso chinokupa iwe kuti ugadzire chinyorwa chinoenderana nemubvunzo wembeu ine Surfer AI zvinoreva. Chinhu chakanaka, chinogona kunge chiri kutanga kwakanaka kana ukashanda nezvirimo. Zvakadaro, the edza kushandisa njere dzekugadzira yakaratidza kuti ose anosarira shure zvikuru nevanyori vavanhu chaivoivo.
Sezvauri kuona, unogona kuwana keywords mahara. Uye chigumisiro chichakurumidza, chehutano hwakanaka, uye, chii chinonyanya kukosha, muhuwandu. Ehe, kune mamwe maturusi emahara uye zviridzwa zve keyword research, ini ndangotora iwo anoita seanonyanya kufadza uye anobatsira. Nenzira, ndeapi maturusi aunofarira? Govera mumhinduro.
kuburitsa: Martech Zone iri kusanganisira affiliate links muchinyorwa chino.
Tags: aiakabvunzawopindurai veruzhinjichakagadzirwa njereMahara izvo zvishandisozvishandiso zvemaharagoogle autosuggestgoogle keyword kurongagoogle keywordsgoogle yekutsvaga konikeyword yakaomakiyi yekuongororakeyword jenaretakeyword researchkeyword surferorganic keywordskubhadhara pakukandappc researchchinzvimbo trackertsvaga mavhoriyamuseomazwi akakoshaseo zanasurfer ai
Aleh Barysevich ndiye Muvambi uye Chief Marketing Officer kumakambani ari kuseri kweSEO PowerSuite, software yehunyanzvi yeiyo yakazara-kutenderera SEO mishandirapamwe, uye Awario, vezvenhau venhau, uye webhu yekutarisa chishandiso. Iye akarongeka SEO nyanzvi uye mutauri kumakambani makuru emakambani, kusanganisira SMX naBrightonSEO.
Iyo Iri Nyore Nzira Yekuita Yako Shopify CSS Iyo Yakavakwa Uchishandisa Liquid Variables.